Tupu ị gụọ nke a, m ga-egosiputa n'ụzọ zuru ezu na m bụ enyi na Troy Burk na Amol Dalvi na ụfọdụ ndị ọrụ ndị ọzọ na Right On Interactive (ROI). Na - anyị bụ mpako ịkpọsa na anyị ga-arụ ọrụ na On On Interactive iji nye ahịa akpaaka posts ebe a na Martech! Ha na ndi eze n’enweko oha! Yabụ kedu ihe dị mma na ụbọchị anyị ga-ekwupụta mmekọrịta, na Gleanster, a
Akụrụngwa ahịa na-aghọ mkparịta ụka anyị na ndị ahịa na-enwekwu kwa izu. Taa, anyị tụlere Hubspot (nke onye ahịa ji mee ihe), Act-On (nke anyị mejuputara maka ndị ahịa anyị abụọ) ma gosipụta ya na onye ahịa yana m na-agwa ndị otu izu gara aga banyere ihe ịga nke ọma ha. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ dịghị otu ihe ahịa akpaaka na-ere ahịa nke ka nke ọzọ mma. Offọdụ n'ime ha nwere ụfọdụ ihe ịtụnanya, ma
Direct Mail bụ ụzọ dị oke ọnụ. N'ihi na ọ dị oke ọnụ, enweghị ike ịme ya n'echeghị eche. M na-agwa ndị ahịa m na ohere iji nweta Direct Mail nke mmadụ nwere metụtara kpọmkwem na etiti igbe ozi ha na mkpofu ahịhịa ha. Naanị otu akụkụ nke akwụkwọ ozi mgbasa ozi dị mkpa karịa ebumnuche na ibe bụ ikike igbu na mkpọsa ahụ. Taa, m natara a mara mma kere